खाद्यजन्य रोगबाट बर्सेनि ६० करोड मानिस प्रभावित – Health Post Nepal
खाद्यजन्य रोगबाट बर्सेनि ६० करोड मानिस प्रभावित
२०७६ जेठ २६ गते १३:५८
पछिल्लो समय नेपालका लागि मात्र नभएर विश्वभर नै खाद्य सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । शुक्रबार (७ जुन) विश्वभर पहिलो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाइयो । ‘खाद्य सुरक्षा सबैको जिम्मेवारी’ मूल नाराका साथ यस वर्ष खाद्य सुरक्षा दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो ।
‘खाद्य सुरक्षा सबैको जिम्मेवारी’को मूल मर्म खाद्यान्न उत्पादन हुने जमिनदेखि लिएर हाम्रो थालसम्म आइपुग्ने सबै चिजबिज सुरक्षित होऊन्, जसले हाम्रो स्वास्थ्यमा नोक्सानी नपुर्याऊन् भन्ने नै हो । यस अभियानको सुरुवात संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वास छ कि, विभिन्न स्तरमा व्यक्ति तथा संगठनहरू यो मुद्दासँग लड्न सशक्त ढंगले सामेल हुनेछन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रत्येक वर्ष ७ जुनलाई विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार विश्वभर पहिलो खाद्य सुरक्षा दिवस मनाइयो । यस वर्षको विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसको मूल सार ‘खाद्य सुरक्षा सबैको जिम्मेवारी’ थियो ।
किन जरुरी छ खाद्य सुरक्षा ?
वास्तवमा खाद्यजन्य रोगहरूका कारण प्रतिवर्ष ६० करोड मानिस प्रभावित हुने गरेका छन्, जससँग लड्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । किनकि, यो स्वास्थ्यसमस्याको मात्र विषय होइन, यो दिगो विकासको लक्ष्यसित पनि जोडिएको विषय हो । यो विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षालाई बढावा दिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । खाद्यजन्य रोगहरू जीवाणु, विषाणु, परजीवी वा रासायनिक पदार्थहरूले दूषित भोजन वा पानीको माध्यमबाट शरीरमा प्रवेश गरेका कारण लाग्ने गर्छन् । एक तथ्यांकका अनुसार प्रतिवर्ष करिब ४ लाख २० हजार मानिसको मृत्यु दूषित खानाका कारण हुने गरेको छ ।
‘दूषित खानाका कारण हुने यी सबै मृत्युलाई पूर्ण रूपले रोक्न सकिन्छ,’ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का महानिर्देशक डा. टेड्रस अधानम घेब्रेयेसस भन्छन्, ‘असुरक्षित भोजन हाम्रो स्वास्थ्य र अर्थव्यवस्था दुवैका लागि खतरापूर्ण छ ।’
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसको माध्यमबाट डब्लुएचओले दूषित खानाका कारण लाग्ने रोगको बोझ घटाउने लक्ष्य लिएको छ । जबसम्म यस विश्वका सरकारहरू, संघ–संस्थाहरू र आममानिस यस अभियानमा जोडिँदैनन्, तबसम्म खाद्य सुरक्षा अभियान पूरा हुन नसक्ने मान्यता डब्लुएचओको छ ।